Apple Watch SE nohavaozina ary iray hafa manana toetra ara-panatanjahantena ho an'ny 2022 | Vaovao iPhone
Apple Watch SE nohavaozina ary iray hafa manana toetra ara-panatanjahantena ho an'ny 2022
Tonga amin'ny faran'ny taona isika ary ny orinasa Cupertino amin'izao fotoana izao dia ao anatin'ny fahasahiranana hita maso. Noho izany antony izany, ny vaovao ofisialy dia tsy mihoatra ny dikan-teny vaovao amin'ny rafitra fiasa samihafa sy ny Fanentanana Krismasy hanomezana fitaovana.
Amin'ity tranga ity dia efa miandraikitra ny hafa ny tsaho momba ny fitaovana vaovao, toa an'i Mark Gurman. Ny mpandinika fanta-daza dia manondro fa miaraka amin'ny Apple Watch Series 8, Apple dia mikasa a ‌Apple Watch SE fanavaozana ary mety ho safidy fiambenana fanatanjahantena kokoa Ny sasany dia efa manondro fa mety hitovy amin'ny famolavolana ny Casio G-Shock angano.
Misy fiovana ve ny Apple Watch SE?
Azo inoana fa mbola maro no miandry ny fiambenana vaovao amin'ny fiandohan'ny taona fa tena tsy mino izahay fa izany no izy. Ny Apple Watch SE ankehitriny dia natomboka tamin'ny Septambra 2020 Ary ny azo antoka indrindra dia ny modely vaovao, raha tonga izy ireo, dia hanao izany amin'ny volana mitovy amin'ny 2022. Ny fanontaniana eto dia raha tena mila fiovana tokoa ity modely ity satria Apple dia manana azy ho maodely ara-toekarena, manomboka amin'ny fidirana, ary ampio hoe Inona no vaovao dia mety hampiakatra ny vidiny.
Na ahoana na ahoana, ny dikan-SE dia "recycle" avy amin'ny fitaovana hafa foana ary noho izany Tsy mino izahay fa hampiakatra be loatra ny vidiny farany amin'ity modely ity i Apple, dia afaka mijanona miaraka amin'ny vidiny ankehitriny mitovy amin'ny dikan-teny vaovao amin'ny 2022.
Amin'ny lafiny iray, araka ny filazan'i Gurman, misy ny mety hisian'ny Apple hanangana modely fanatanjahantena sy mahatohitra kokoa. Ity tokony ho Apple Watch vaovao ity, dia hanana endrika "hamatanjaka" izay afaka manampy tranga mahatohitra kokoa amin'ny scratches, bumps, falls sy ny toy izany. Izany no mahatonga ny resaka momba ny Apple Watch mety haka tahaka ny famantaranandro Casio angano.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » Apple Watch » Apple Watch SE nohavaozina ary iray hafa manana toetra ara-panatanjahantena ho an'ny 2022
WhatsApp dia manandrana endrika vaovao amin'ny hafatra feo ao amin'ny beta ho an'ny iOS
Ny vaovao rehetra avy amin'ny Apple ho an'ny 2022 hoy i Gurman